Iyaqhubeka iKhomishana kaFarlam | isiZulu
Kushoda ubufakazi ngeMarikana - Uphenyo
Uphekwe ngemibuzo uMathunjwa - Marikana
Imindeni isola amaphoyisa ngolwaseMarikana
Johannesburg - Kuqubuke imibuzo ngalokho okwabe kuhlelwa ngamaphoyisa, ngaphambi kokuthi kudutshulwe kubulawe abavukuzi abangu-34, ababetelekile emayini iLonmin yaseMariakana, eNorth West.
Ummeli wakwaHuman Rights Commission uNokukhanya Jele, ubepheka ngemibuzo uBrigadier Zephania Mkhwanazi ngesikhathi kuqhubeka iKhomishana kaFarlam, ehleli eRustenburg, nezama ukuthola kabanzi ngokwenzeka ngesikhathi kudutshulwa abavukuzi.
Le nhlekelele yenzeka mhlaka-16 Agasti ngonyaka ofile.
UJele ubuze ngokungamenywa kwamanye amaphoyisa ukuthi azokwelekelela njengoba babe bengu-3 000 ababhikishi, amaphoyisa wona engu-170 kuphela.
UMkhwanazi uziphendulele wathi wabe engasiyo ingxenye yabantu ababehlela ngalokhu okwabe kuqhubeka eMarikana, wathi ukungamenywa kwamanye amaphoyisa kwaphazanyiswa wukuthi kwakukhona eminye imibhikisho ayebe iqhubeka ezweni.